TAMBAJOTRAN-JIOLAHY : Maty voatifitra teny Mausolée i Kôma lehiben’ny jiolahy
Taorian’ireo 9 lahy namany voasambotra, ny faran’ny herinandro teo, dia lavon’ny BC4 teny Mausolée koa i Kôma izay tena lehibe mpitarika amin’ity fikambanan-jiolahy ity, araka ny tatitra voaray avy amin’ny Polisim-pirenena omaly. 29 octobre 2019
Raha tsiahivina, ny faran’ny herinandro teo dia lehilahy miisa 09 no ravan’ny Polisy avy eo anivon’ny sampana ady heloka bevava sakelika faha-4. Anisany tompon’antoka amin’ny vaky trano, fanafihana mitam-piadiana, asa fanendahana izay matetika miafara hatramin’ny vono olona mihitsy ireto sivy lahy ireto, eto an-drenivohitra sy ny manodidina. Ohatra amin’izany ny tranga tamin’ny ny volana septambra lasa teo rehefa novelesin’ireto jiolahy ireto tamin’ny « bois rond » ny raim-pianakaviana iray sy ny vadiny mpivarotra anana teny Tsiadana, ka namoy ny ainy ilay raim-pianakaviana raha toa kosa ka tapaka ny tanan’ilay renim-pianakaviana.
Nahatrarana rongony 13 kg
Tamin’ny fotoana nahatraran’ny Polisy BC4 azy 09 lahy ireo dia fantatra ihany koa fa mbola nahatratrarana rongony amin’ny gony maro izay efa voafantina sy voafono milanja 13 kilao ireto farany. Tsy nijanona hatreo anefa ity raharaha ity satria dia fantatra fa mbola miriaria any ny sasany amin’izy ireo ary anisan’izany ny raindahiny izay fantatra amin’ny anarana hoe « Kôma », ka rehefa nanohy ny fikarohana ny BC4 dia naharay angom-baovao mahakasika ity jiolahy sy ny namany roa hafa, izay tazana nihaodihaody teny amin’ny faritra Mausolée sy Ankatso. Napetraka ny vela-pandrika ka rehefa niroso tamin’ny fisamborana ny avy amin’ny Polisin’ny BC4 dia nitifitra avy hatrany ireto jiolahy, ka tsy maintsy niroso tamin’ny fampiasan-kery koa ny Polisy teny an-toerana. Vokany, namoy ny ainy nandritra ny fifampitifirana i « Kôma » raha toa kosa ka tafaporitsaka ny namany roa lahy hafa. Mbola tratra teny aminy ny basy vita gasy iray niaraka tamin’ny bala ary ihany koa ny antsy lava lela iray izay fanaovany ny asa ratsiny.
Efa voafonja ireo naman’i Kôma
Ny angom-baovao azo sy ny fanadihadiana no nahafantarana, fa i Kôma dia naman’i Tsôla izay efa eny Tsiafahy amin’izao fotoana izao rehefa voasambotry ny BC4 ihany koa, izay raindahiny amin’ny asa fanafihana mitam-piadiana teto an-drenivohitra. Iny faritra Tsiadana, Mausolée sy ny manodidina iny no tena nahalalana an’i Kôma, izy no anisany tompon’antoka tamin’ny fanendahana ny mpianatra miditra vao maraina eny Ankatso ary hatramin’ny vono olona izay niseho teny amin’iny faritra iny dia voatonona hatrany ny anaran’i Kôma sy ny namany iray izay antsoina hoe « Belônne » (efa voasambotry ny CSP2 Ambohijatovo ary efa any Tsiafahy), ary farany dia fantatra ihany koa fa anisany nandray anjara tamin’ny fanafihana ny « Super-maki » Antsahameva izy. Mitohy ny fanadihadiana sy ny fikarohana ireo olon-dratsy mbola tafatsoaka.